★မြန်မာ့အလင်း★: ရခိုင် လယ်မြေများကို ဘင်္ဂလီ အခြေချသူများက အတင်း အဓမ္မ သိမ်းဆည်းထား
ရခိုင် လယ်မြေများကို ဘင်္ဂလီ အခြေချသူများက အတင်း အဓမ္မ သိမ်းဆည်းထား
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တကောင်း တောင်တန်းနယ် ရွာတော်ခရိုင် နတ်ကျောက်ဆော်ရီမြို့နယ် မရှက်ချောင်းဒေသရှိ ရခိုင် ကျေးရွာတချို့မှ လယ်မြေများကို အခြေချရန် ရောက်ရှိလာသူ ဘင်္ဂလီများမှ အတင်းအဓမ္မ သိမ်းဆည်း ထားကြောင်း ဘင်္ဂလီ သတင်းစာ တစ်စောင်က နိုဝင်္ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ရေးသား ဖေါ်ပြသည်။
အဆိုပါ သတင်းအား ထုတ်ဖေါ်ရေးသားသော သတင်းစာမှာ ကော့ဘဇားမြို့မှ ထုတ် THE DAILY BANKKHALI သတင်းစာ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ လယ်မြေသိမ်းဆည်းခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်တကောင်း တောင်တန်း ဒေသရှိ UN လက်အောက်ခံ အဖွဲ့ တခုတွင် ပါဝင် လုပ်ဆောင်နေ သော ကိုအီးနီးက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“သိမ်းဆည်းခံရတဲ့ လယ်မြေကတော့ ၅၅ ဧကဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလယ်မြေတွေက ဘိုးဘီဇူဇာ ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ လယ်မြေတွေပါ။ မနေ့ကမှ ဧည့်သည် အဖြစ် လာရောက် လုပ်ကိုင် စားသောက်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီ လူမျိုး တစုက အတင်းသိမ်းပြီး လုပ်စား နေကြတာ ဖြစ်တယ်“ ဟု သူကပြောသည်။
အပြည့်အစုံဖတ်မယ်.. ဒန်.. ဒန်.. ဒန်
ငါတို့မြန်မာ့မြေတွင် မွတ်ဆလင်တွေလို အဖေက သမီး၊ သားက အမေ၊ အစ်ကိုက ညီမ၊ တူက အဒေါ်၊ မြေးက အဖွားကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ အဖြစ်မျိုးလုံးဝမရှိ။ တရုတ်လိုလည်း ကလေးအရင်းကို မိန်းခလေးဖြစ်လို့ မွေးခန်းထဲမှာ သတ်ဖြတ်ခြင်းမျိုးငါတို့မှာ မရှိ။ အနောက်ဖက်လိုလည်း ကာကွယ်ဆေးမှာ အဆိပ်ခတ်တာမျိုးလည်းမရှိ။ နအဖနှင့် ဒီမိုသမားတွေအချင်းချင်း စောက်တင်းပြောတာတွေ ကြားဖန်များလို့ ၊ မကြီးမငယ်ရန်ဖြစ်တာတွေ မြင်ဖန်များလို့သာ မြန်မာဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ငယ်နေခြင်းဖြစ်၏ ☼ နှစ်သစ်မှာ မြန်မာဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူတတ်ပါစေ။ ☼ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ဂုဏ်ယူတတ်ပါစေ။☼ ယုတ်ညံ့သည့်မွတ်ဆလင်ဝါဒ အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်ဖြစ်လာပါစေ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 6:03 AM
zawzaw:မဝေနှင်းပွင့်သုံမှာ ကိုယ်ဝန် ၆လရှိ၏ ဘယ်သူနင့်ရမှန်းမသိ နောက်တွင် မွတ်ဆလင်များက အလာရှင်နှင့်ရတာအလာရှင်ပေးတာဟုပြောကြ၏တကယ်တော့မဝေနှင်းပွင့်သုံကို ကျနော်လုပ်တာဗျကျနော်နဲ့ရတာ ဝေနှင်းပွင့်သုံကရှက်လို့မပြောတာ
အစ္စလာမ် ဘာသာကိုစော်ကားသူများ ဒုက္ခလှလှတွေ.တတ်သည်။ သာဓကများဖြင်.ပြမယ်
၁။ နေမဝင်အင်ပါယာပိုင်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်အစိုး၇က မူဆလင် မြန်မာ အဓိက၇ုန်း ဖြစ်အောင် လှုံဆော်လို. ဗုန်းဗုန်းလဲ ပြုတ်ကျသွားပြီး အခုနိုင်ငံသေးသေးလေးပဲကျန်တော.တယ်
၂ ။ မဆလအစိုး၇အဖွဲ.က မျက်မှန်တင်ဦးလဲ ကုလား-ဗမာ အဓိက၇ုန်းဖြစ်အောင် လှုံဆော်လို.ပြုတ်ကျပြီးထောင်ထဲမှာ သေခါနီးအထိနေလိုက်၇တယ်
၃။ ကျောက်အုတ်ကြီးကဲ.သို.ခိုင်မာသော ဦးနေဝင်း ပြည်နဲ.တောင်ကြီးမှာ ကုလား-ဗမာ အဓိက၇ုန်းဖြစ်အောင် လှုံဆော်လို.အ၇ှက်တကွဲပြူတ်ကျပြီးမသေမ၇ှင်မှာမီး၇ှို.ခံလိုက်၇တယ်
၄။ နဝတဦးတင်ဦး S2 လဲ မူဆလင်အဖိုးကြီးဂေဟာကိုေ၇ွ.ပြောင်းခိုင်းပြီး မူဆလင်အဖိုးကြီးများနေစ၇ာမ၇ှိအောင်လုပ်ခဲ.သည်.အတွက်အလောင်းမလှသည်.ဘဝဖြင်. အသေဆိုးဖြင်.သေခဲ.၇သည်
၅။ထောက်လှမ်းေ၇းဦးခင်ညွန်.နဲ.သူ၏အဖွဲ.သားများသည် ဗလီများကိုသံယာတော်များအယောင်ဆောင်ပြီးပျက်ဆီးဗလီဆ၇ာကိုတိုင်မှာကြိုးချည်ပြီး သတ်တယ် ဒါကြောင်.သူနဲ.တဖွဲ.လုံးပြူတ်ကျပြီး အခုလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ.ကြုံ၇တယ်
၆။အစ္စေ၇းနိုင်ငံလဲ ဗလီကိုဖြိုခဲ.လို. အခု တောင်မီးအကြီးအကျယ်လောင်ပြီး လူတွေအဖြစ်ဆိုးနဲ.သေကုန်ကြပြီ
နင်အလှည်.မကြာခင်ေ၇ာက်တော.မယ်ေ၇ာက်တဲ.အခါမှာ အလာကိုစော်ကားမိလို. ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ.ကြူံတယ်ဆိုတာ နင်သတိ၇လိုက်ပါ
၀ါးဟားဟား။ စောက်ကျွန်ကုလားရေ. . . ဘာ Allahလဲ? သူများ ဘုရားကို ခိုးပြီး . . .ကိုယ့်ဘုရားလုပ်ထားတယ်။ Allah ဆိုတာ သူများတွေကိုးကွယ်နေတဲ့ နတ်တစ်ကောင်ဟ။ အဲလို ခိုးရာပါပစ္စည်းကို စောက်ရှက်မရှိ မိမိကိုယ်ပိုင်လို လူလည်ခေါင်မှာ ထုတ်ပြောရဲတယ်? ဟဲဟဲ. .. ကုလားတွေရဲ့ အဲဒီအစွမ်းကိုတော့ လေးစားပါတယ်လေ။ အေးကွာ မင်းပြောသလို Allah ကို စော်ကားတဲ့သူတွေ ဒုက္ခရောက်သလားတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ် လမ်းဘေးမှာ ခွေးလို ၀က်လိုသေတာကတော့ Allahကို ဖင်ကုန်းကန်တော့နေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေချည်းပဲနော်။ အစ်စရေးကလဲ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ Allah ကို ကန်တော့နေတဲ့ မွတ်ဆလင်ကို ခွေးလိုဝက်လိုသတ်နေတာချည်းပဲ။ ၀ါးဟားဟား
မြင့်မြတ်သည့် မြန်မာ့မြေမှာ ယုတ်ညံ့သည့်မွတ်ဆလင်ဝါဒကို ဖြုတ်ပြစ်မည့်
ရခိုင် လယ်မြေများကို ဘင်္ဂလီ အခြေချသူများက အတင်း အဓမ...
urgent: Stop the U.S./S Korean Attack - Know the F...
သတင်းတွေ ပြောတိုင်းမယုံနဲ့ ပြီးခဲ့တာတွေလဲ မမေ့နဲ့ ...
မြန်မာစကားမပြောတတ်တာ သတိမထားမိအောင် ၂ယောက် စလုံးအသ...
မဖြူဖြူသင်းရဲ့ HIV/AIDS ဂေဟာမှ ဝေဒနာရှင်များကို ဦ...
Allah ၏ ဆန္ဒတော်နဲ့အညီ ခွေးသေ၀က်သေ သေကြပါ။ သူတောင်...
ပြောတိုင်းယုံသူများဖတ်ရန် : Biotech company secret...
မွတ်ဆလင်တို့သာ ဘေးဒုက္ခမျိုးစုံရနေခြင်းသည် Allah ၏ဆ...
Allah သည် မွတ်ဆလင်ကို ခွေးထက်နိမ့်အောင် ဖန်ဆင်း၏ ....
ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာဘာလဲသိချင်ရင်ကြည့်ပါ : G20 ...
Seoul, demonstration ahead of G20 leaders... - no ...
Hundreds protest in Seoul outside the G20 summit -...
အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တဦး၏အိမ်ကို ဗလီအဖြစ် မြို့တော်ဝန်သတ...